Wadamo badan oo xidhey xuduudahooda sababo la xiriira COVID19 cusub – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Wadamo badan oo xidhey xuduudahooda sababo la xiriira COVID19 cusub
Wadamo badan oo xidhey xuduudahooda sababo la xiriira COVID19 cusub
Wadamada adduunka oo dhan waxay xireen xuduudaha waxayna mamnuuceen safarka u dhexeeya UK cabsi laga qabo culeys cusub oo coronavirus ah oo aad u faafa, kaasoo sababa jahwareer dhanka safarka ah iyo sare u qaadista rajada cunno yaraanta.
Culayskaas oo ay khubarada qaarkood ku tilmaameen B.1.1.7, ma aha noocii ugu horreeyay ee cusub ee fayraska faafa ee soo ifbaxa, laakiin waxaa la sheegay in boqolkiiba 70 ka badan la isu gudbin karo marka loo eego faafida xanuunkii hore kaas oo horeba ugu badnaa Ingiriiska.
Waxaa dunida oo dhan ka jirey 77.3 milyan oo kiis oo cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’, oo ay u dhinteen in ka badan 1.7 milyan oo qof.
wadamadan hoose ayaa ka xidhey xuduudahooda dadka ka imanaya ingiriiska iyo koonfurta africa oo laga helay xanuunka karoona oo cusub waxaana ka mida wadamada wadanka ka mamnuuca duulimaada ka imanaya labadan wadan.
Dhibaatada cusub ee coronavirus ayaan wali laga helin Hindiya iyadoo aad u baadheysa dadka ka imanaya labada wadan, iyadoo baadheysa dadka ugu danbeyey ee ka imaada wadamada,iyadoo sheegtey iney joojisey labada wadan wxii ka imaada.
Shiinaha ayaa joojiyay howlihii adeegiisa fiisooyinka in la siiyo dadka ka imanaya ingriiska oo ah halkii ugu horeysay ee laga helo xanuunkan cusub ee aadka u faafaya
Hungary ayaa ka mamnuucday diyaaradaha rakaabka ee ka yimaada UK inay soo caga dhigato wadankeeda diyaaradaka ka imanaya ingiriiska iyo koonfurta africa. hadana waxaa laga soo sheegaya hungary in Mawjadda labaad ee safka faafa waxay u muuqataa inay heer sare gaadhay Hungary
Nooc cusub oo coronavirus ah ayaa laga yaabaa inuu ka jiro Jarmalka lakiin wali lama xaqiijin wadanka jarmalka
Koonfur Afrika waxay wajaheysaa go’doon iyadoo laga cabsi qabo culeyska cusub ee COVID19ka cusub ee ka dilaacay wadank
Uzbekistan waxay xireysaa xuduudaha sababo la xiriira COVID-19 culeys cusub sidoo kale wadanka Guatemala ayaa joojiyey rakaabka labada wadan si loo xaddido soo-galootiga ka imanaya Boqortooyada Ingiriiska, Koonfur Afrika
Previous articleSuudaan ayaa mamnuucday soo galida rakaabka ka yimaada Britain, Netherlands, South Africa
Next articleHORTA MA ISBEDEL BAA SOCDA MISE SHIRQOOL? HALKEESE AYAY SOMALILAND KAGA JIRTAA?